कामिनीविरुद्ध किन खनिदैछन् भेण्डर र कर्मचारी ?
मनाङ एयरको हेलिकप्टर क्षति
डडेल्धुरा कांग्रेसमा विवाद समाप्त
मल्ल र भट्टलाई प्रदेशसभाको सभाको टिकट
वैद्य र चन्दलाई पार्टी एकतामा आउन अध्यक्ष दाहालको आग्रह
काठमाडौँँ, २७ जेठ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत र
धनकुटा, २७ जेठ । प्रविधियुक्त आधुनिक कृषि प्रणालीको प्रयोगबाट कृषि उत्पादन बढाउन जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले भूकम्पपीडित किसानलाई
गौशाला, २७ जेठ । नेपाल विद्युत् प्राधिरकण महोत्तरी, वितरण केन्द्र गौशालाले अनधिकृत रुपमा विद्युत् प्रयोग गर्दैआएका
एमडीलाई चलाउन नसकेपछि फोरजी अवरोध गर्ने प्रयास
काठमाडौं । नेपाल टेलिकममा टेण्डर नपाएका केही भेण्डरको भत्ता खाएर आफ्नै कम्पनीका प्रबन्ध
वृद्ध वृद्धाहरुको भोट हाल्ने अधिकार?
हामीले पनी भोट दिन पाए कोई सत्कर्मी नेताले जीत्थे होला
हाम्रो नजिक आई तपाइको माग के हो भनेर हमिलाई सोद्धे होला
पशुपतिको वृद्धा वृद्ध आश्रम
कोही लेखक हामी माज भए लेख्ते होलान् हाम्रो जीवन को सार
कोही नेता वृद्धा यहाँँ भइदिए लगाउथे होलान् बोल्थे होलान्
यो दुःखाईको जीवनको पार साच्चै हाम्रो देशमा वृद्धा वृद्धहरुको दयनिय अवस्थामा
‘सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’को शुभारम्भ
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ‘सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ (कोपोमिस)को आज शुभारम्भ गरेको छ । नेपालको सहकारी तथा गरिबको अवस्थाबारे जानकारी राख्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको सो अनलाइनको शुभारम्भ गर्दै सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री
संसद र सहकारीबीच अन्र्तक्रिया
काठमाडौ । नेपाल सहकारी पत्रकार समाज(सिजेएन)ले प्रस्तावित सहकारी ऐनको बिषयमा संसद र सहकारी अभियानतासंग अन्र्तक्रिया गरेको छ । सो कार्यक्रममा सहभागिहरुले सहकारी ऐन आउनेमा शंका व्यक्त गरेका छन । सांसद हरिलाल ज्ञवालीले प्रस्तावित सहकारी ऐन अन्तिम चरणमा पुगेको भएपनि पुनः दफावार छलफलमा जाँदा ऐन आउन ढिलाई भएको बताएका छन् ।
रसुवा, २७ जेठ । गोसाइँकुण्डका लागि यात्रु लिई काठमाडाँैबाट उडेको मनाङ एयरको हेलिकप्टर केही बेर अगाडि
काठमाडौं । लामो समयदेखि नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा सक्रिय रहेका कराते खेलाडी एवं प्रशिक्षक गजेन्द्र बहादुर खपाङ्गी ‘ईश्वर’ सम्मानीत हुनु भएको छ । माघे संक्रान्ति २०७४ को अवसरमा नेपाल मगर संघद्वारा
नेपालमा सोतोकान करातेको संस्थागत विकास र वार्तमान अवस्था
नेपालमा संचालनमा रहेका कराते खेलका थुप्रै विधाहरु मध्ये एक हो सोतोेकान कराते । नेपालमा सोतोकान कराते खेल करातेका वरिष्ठ प्रशिक्षक हेमकमार श्रेष्ठले भित्र्याएका हुन् । नेपालमा सोतोकान कराते शुरुभएको धेरै लामो समय नभएता पनि नेपाली खेलकुद जगतमा कराते तर्फ बेग्लै पहिचान बनाउँदै
हाम्रो कम्युनिष्ट पार्टी र माओवादी केन्द्रबीच एकता हुँदै
काठमाडौं । हाम्रो कम्युनिष्ट पार्टी नेपालका महासचिव हिरालाल भुजेलले माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकताको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनु भएको छ । प्रदेश र प्रतिनिधि सभा
महोत्तरी जिल्लाको उत्तरवर्ती क्षेत्रका किसान प्राङ्गारिक खेतीतिर आकर्षित भएका छन् । सघन तरकारी खेती गरिने जिल्लाको उत्तरवर्ती क्षेत्रका बर्दिवास र गौशाला नगरपालिका
पुरुषको आम्दानीमै भर पर्दै आएका अमरगढी नगरपालिका–७ पोखराका महिला आजभोलि तरकारीखेती गरी आफैँ आत्मनिर्भर बन्दै गएका छन् । यहाँका महिला तरकारीखेतीबाट वार्षिक रु एक लाखदेखि रु दुई लाखसम्म आम्दानी गर्न सफल भएका छन् ।
नवलपरासी जिल्ला मह उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्दै गएको छ । नगदे आम्दानीका रूपमा आजभोलि किसानले मौरीपालन व्यवसायीलाई अघि बढाउदै आएका हुन् ।
तीन सय हेक्टरमा सिँचाइ
जिल्लामा निर्माण गरिएका डेडदर्जन बढी सिँचाइ कुलोबाट तीन सय १९ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएको छ । लामो समयदेखि पानीको स्रोत भएर
बाह्रै महिना गर्मी नहुने जेफाले ः पर्यटकलाई आकर्षणको केन्द्र
पथरी (मोरङ), १९ वैशाख । मोरङ भन्नासाथ आम नेपालीले समथर भूभागको कल्पना गर्छन् । धान फल्ने फराकिला खेत
पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र बन्दै म्याग्दीको लभ्लीहिल
बेनी (म्याग्दी), १८ वैशाख । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका– २ ज्यामरुककोटको खबरामा रहेको लभ्लीहिल आन्तरिक पर्यटकका लागि मुख्य
हिमाल र सूर्योदय हेर्न पञ्चासे आउने पर्यटक बढ्दै
फलेवास (पर्वत), १५ वैशाख । कास्की, स्याङ्जा र पर्वतको सङ्गममा पर्ने प्रसिद्ध पञ्चासे क्षेत्रमा घुम्न आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको सङ्ख्यामा बृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा मौसम सफा भएपछि हिमाल हेर्न आउने पर्यटकको दैनिकरूपमा भीड
मलेखु (धादिङ), १३ वैशाख । गत फागुन २५ गतेदेखि हराइरहेका दुई ताइवानी पर्यटक बुधबार खोजी दलले उत्तरी धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिकामा फेला पारेको
सुरुङ्गा (झापा), १९ वैशाख । झापाका २८ वटा सामुदायिक विद्यालयमा विज्ञान, गणित र अङ्ग्रेजी प्रयोगशाला निर्माण गरिने भएको छ ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय भक्तपुरले जिल्लामा रहेका संस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारण गरेको छ । जिल्ला शिक्षा अधिकारी अर्जुनबहादुर रायमाझीको
पोखरा विश्वविद्यालयले एमएस्सी स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ विषयमा पठनपाठन सुरु गरेको छ । नेपालमा विनाशकारी भूकम्पपछिको विषम परिस्थितिमा
सल्यान जिल्लामा चार प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेका छन् । सरकारले विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई ब्यापक बनाएको भए पनि विपन्न, अनाथ तथा
वातावरण / वन
वन र वातावरण
नेपालको हरीयो वन हामी र हाम्रो प्राण बचाउने गरीवी हटाउने जैविक विभित्ता अमुल्य स्रोतहरुले भरीपुणर््ा भन्डार लगानि विनाको प्राकृती स्रोत केवल सम्रक्षण
वन्यजन्तु संरक्षणका लागि वनमा गाईबस्तु चराउन बन्द
रत्ननगर (चितवन), १५ वैशाख । पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास भएको पूर्वी चितवनको कुमरोज मध्यवर्ती सामुदायिक वन क्षेत्रमा गाईबस्तु चराउन बन्द गरेको छ । पर्या–पर्यटनको विकास र वन्यजन्तु संरक्षणका लागि यहाँ चरिचरन बन्द गरिएको कुमरोज सामुदायिक वनका कार्यालय सचिव भरत नेपालले जानकारी दिनुभयो ।
शुक्लाफाँटाबाट बाह्रसिङ्गे स्थानान्तरण
भीमदत्तनगर, १३ वैशाख । कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट बुधबार दुईवटा पोथी बाह्रसिङ्गे चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा स्थानान्तरण गरिएको छ ।
रानीबारी वनमा चरा अध्ययन केन्द्र
राजधानीको केन्द्र भागमा अवस्थित रानीबारी सामुदायिक वनमा पक्षी तथा जैविक विविधता संरक्षण सिकाइ केन्द्र भवनको उद्घाटन भएको छ । नेपाल पक्षी
सिरहा, २७ जेठ । लामो समयदेखि लथालिङग भएको कमला नहर सिँचाइ योजना निर्माणकार्य
योकोहामा (जापान), २० वैशाख । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले नेपालका साना सहरमा स्वच्छ खानेपानी आपूर्ति व्यवस्थापन सुधार तथा क्षमता अभिवृद्धिमा सघाउने
काठमाडौँ, १९ वैशाख । स्थानीय तहको निर्वाचनलाई धितोपत्र बजारले ‘हरियो झन्डा’ देखाएर स्वागत गरेको छ । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी मनोनयनका लागि तोकेको दिन आज
बीउमा कृषकलाई अनुदान
सल्यान, १९ वैशाख । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले मकैको बीउमा कृषकलाई ७५ प्रतिशत अनुदान दिने भएको छ ।
काठमाडौँ, १५ वैशाख । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि अनुदान वितरण गर्न
भूकम्पसम्बन्धी ‘चलायमान पहाड’ वृत्तचित्र प्रदर्शन
काठमाडौँ, १३ वैशाख । गोर्खाको बारपाक केन्द्रविन्दु बनाएर भूकम्प गएको दुई वर्ष पूरा भएको अवसर पारेर ‘चलायमान पहाड’ नामक वृत्तचित्रको दोस्रो भाग मङ्गलबार प्रदर्शन गरियो ।
मैथिली नाटकबाट सामाजिक जीवनमा सकारात्मक प्रभाव
जनकपुरधाम, २० वैशाख । मैथिली नाटकको सामाजिक जीवनमा सकारात्मक प्रभाव परेको धारणा नाटककार र अभियन्ताले व्यक्त गर्नुभएको छ ।
डेङ्गुका आधा दर्जन बिरामी फेला परेपछि महोत्तरीमा सतर्कता अपनाइयो
महोत्तरी, २० वैशाख । पछिल्लो समय महोत्तरीको बर्दिवासमा डेङ्गु सङ्क्रमणका आधा दर्जन बिरामी फेला परेपछि जिल्ला
एक्स–रे मेसिन बिगँ्रदा बिरामी मर्कामा
महोत्तरी, २० वैशाख । महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वरमा रहेको एक्स–रे मेसिन समयमै मर्मत हुन नसकेपछि सेवाग्राही प्रभावित भएका छन् । करिब पाँच
तीनकुनेमा स्त्रीरोग स्वास्थ्य शिविर
काठमाडौँ, १९ वैशाख । काठमाडौँ महानगरपालिका–३५, तीनकुनेमा सोमबार स्त्रीरोगसम्बन्धी बृहद् स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरियो ।
औलो रोगका बिरामी घट्दै
कञ्चनपुर, १६ वैशाख । लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने औलो रोगका बिरामी कञ्चनपुरमा प्रति वर्ष घट्दै गएका छन् ।
‘मनले चाहेको पु-याउने मैतीदेवी’
डिल्लीबजार र ज्ञानेश्वरका बीचमा अवस्थित मैतीदेवी मन्दिरमा नेवार समुदायका वज्राचार्यहरूले पुस्तौँदेखि पूजा गर्दै
निर्वाचन (कसूर र सजाय) ऐन, २०६३
ज्ञ) निर्वाचन (कसूर र सजाय) ऐन, २०६३ प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०६४।१२।१२ २०६३ सालको ऐन नं. २ निर्वाचन कसूर र सजाय सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन प्रस्तावना ः निर्वाचन कसूर र सजाय सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, व्यवस्थापिका–संसद्ले यो ऐन बनाएको छ ।
जनअधिकार खोस्न उद्यतहरु
स्थानीय जनमत प्राप्त गरेर विजय भएका गाउँपालिका–नगरपालिकाहरुका प्रमुख–उपप्रमुखहरुले राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रिय सभामा आफ्नो मत दिन पाउने, छान्न पाउने संविधान प्रदत्त अधिकारलाई संशोधन गरेर
‘राससकर्मी मण्डलसहित पाँचजना पुरस्कृत
गौशाला, २० वैशाख । विश्व प्रेस स्वतन्त्रा दिवसको अवसरमा आज महोत्तरी जिल्लाबाट राष्ट्रिय समाचार समिति(रासस)का संवाददाता
चार पुस्तक विमोचित
काठमाडौँ, १८ वैशाख । साहित्यकार रामकुमार पाँडे र लेखक प्रकाश ए राजद्वारा लेखिएका चार पुस्तक आज विमोचन गरिएको छ । ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा प्राज्ञ डा तीर्थबहादुर श्रेष्ठले ती कृति
पहिलो जेन कविता गोष्ठी
काठमाडौँ, १८ वैशाख । बेटर नेपाल अभियान र जरा फाउन्डेसनको आयोजनामा आज यहाँ पहिलो पटक ‘जेन कविता गोष्ठी’ सम्पन्न भएको छ ।
गरिबी निवारण कोषद्वारा सिर्जनशील पुरस्कार
पथरी (मोरङ), १६ वैशाख । गरिबी निवारण कोष मोरङले उत्कृष्ट संस्था र सदस्यलाई शुक्रबार पुरस्कृत गरेको छ । कोषको सहयोगमा मोरङमा गठित सामुदायिक संस्था र तिनका सदस्यमध्येबाट उत्कृष्ट भएकालाई सिर्जनशील पुरस्कार प्रदान
नेचामा पहिलोपटक ल्यान्डलाइन फोन सेवा
सोलुखुम्बु, १३ वैशाख । आजदेखि सोलुखुम्बुको नेचामा ल्यान्डलाइन टेलिफोन सेवा सुरु भएको छ । सो सेवाको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले टेलिफोन गरेर आज शुभारम्भ
शुद्ध पानी उपलब्ध गराउन कम्प्युटरयुक्त मेसिन
कञ्चनपुर, १२ वैशाख कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१० मा रहेको झलारी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ समितिले उपभोक्तालाई कीटाणुरहित पानी उपलब्ध गराउन कम्प्युटरयुक्त मेसिन जडान गरेको छ । ‘वाक टेक’
टेलिफोनको पहँुच बाहिर रहेको गाउँमा जिएसएम सेवा सुरु
ताप्लेजुङको सिरिजङ्घा गाउँपालिका–७ स्थित खेवाङमा जिएसएम टावर सञ्चालनमा आएको छ । यसअघि (मोबाइल फोन) सञ्चारको पहुँचमा नरहेको सो क्षेत्रमा हालै टावर निर्माण सम्पन्न भएसँगै जिएसएम (टुजी) सेवा
नयाँ बर्षको अवसरमा भक्तपुरमा ट्राईथोलन खेल हुने
नयाँ बर्षको अवसरमा भक्तपुरमा ट्राईथोलन खेल सञ्चालन हुने भएको छ । भक्तपुर ट्राइथोलन संघले खेल क्षेत्रबाट पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ उक्त खेल सञ्चालन गर्न थालिएको आयोजकले जानकारी दिएको छ ।
राष्ट्रले खेलाडीका लागि स्वास्थ्योपचारमा सहुलियत दिनुपर्ने माग खेलाडीले गरेका छन् । स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापा र राज्यमन्त्री तारामान गुरुङलाई
चाँगुमा ब्याडमिन्टन कोर्ट बन्ने
नगरकोट, १९ वैशाख । भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका–४, चाँगुमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ब्याडमिन्टन कोर्ट बन्ने भएको छ ।
सोमबार रियलमाथिको जीत पदकका लागि ‘महत्वपूर्ण कदम’ ः मेसी
बार्सिलोना फुटबल क्लबका अर्जेन्टिनी फुटबल खेलाडी (स्ट्राइकर) लियोनल मेसीको जादुले सोमबार बिहान भएको स्पेनी ला लिगाको प्रतिस्पर्धामा उहाँका चिरपरिचित प्रतिद्वन्द्वी क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई स्तब्ध बनाएको छ ।
जिल्लाको सूर्याेदय नगरपालिकास्थित फिक्कल बजारमा ‘छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण सितोरियो कराँते प्रतियोगिता’ आयोजना गरिने भएको छ । नेपाल, भारत, भुटान, बङ्गलादेश र श्रीलङ्काका ४०० खेलाडीले प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।
इरानमा कम्तीमा ७० जना च्यापिए
तेहरान, २० वैशाख । इरानको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको खानीमा बुधबार पहिरो जाँदा कम्तीमा ७० जना स्थानीय कामदार च्यापिएका छन् । गोलेस्टन प्रदेशको खानीमा मिथेन ग्यास विस्फोट भएको विभिन्न सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । “खानीको एकतर्फ ४० जना कामदार च्यापिएका छन् भने अर्को तर्फ अरू ३० देखि ४० जनासम्म च्यापिएका छन्,” इरानको आपतकालीन सेवाका प्रमुख पिर हुसैन कोलिभान्दलाई उद्धृत गर्दै इरानको समाचार संस्था आईएसएनएले जनाएको छ ।
डढेलो नियन्त्रण गर्न चीनमा हजारौँ बासिन्दा प्रयासरत
चीन, २० वैशाख । चीनको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने भित्री मङ्गोलिया स्वायत्त प्रदेशमा भएको डढेलो नियन्त्रण गर्न सात हजार सात सय जना लगातार प्रयासरत रहेका छन् । मङ्गलबारदेखि सुरु भएको डढेलो नियन्त्रण गर्न उनीहरूले बुधबार अबेरसम्म पनि प्रयास गरिरहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन् । ग्रेटर हिङ्गन पहाडमा पर्ने बेइडाहे जङ्गलमा आगलागी भएको हो । मङ्गलबार बिहानसम्म सो जङ्गलको पाँच हजार हेक्टर क्षेत्रमा आगलागी फैलिएको आगलागी नियन्त्रणसम्बन्धी क्षेत्रीय कार्यालयले जनाएको छ । सुख्खा वनस्पती, तीब्रगतिमा चलिरहेको परिवर्तनशील हावा, उच्च तापक्रम आदिका कारणले आगलागी नियन्त्रण गर्न कठिनाई भइरहेको आगलागी नियन्त्रणमा खटिएकाले बताएका
पाकिस्तानमा चार आतङ्ककारीलाई फाँसीको सजाय
इस्लामाबाद, २० वैशाख । पाकिस्तानमा चार जना आतङ्ककारीलाई बुधबार फाँसीको सजाय दिइएको छ । आतङ्कबादमा सलग्नता रहेको आरोपमा ती चार आतङ्ककारीलाई फाँसी दिइएको पाकिस्तानी सैनिक स्रोतले जानकारी दिएको छ । सैनिकद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिका अनुसार निर्दोष नागरिकमाथि आक्रमण र सशस्त्रबल माथि आक्रमणजस्ता आतङ्ककारी आक्रमणमा सलग्नता रहँदै आएको आरोपमा यी चार आतङ्ककारीलाई फाँसी दिइएको छ । फाँसीका सजाय पाएका ती आतङ्ककारी प्रतिबन्धित समूह तेहरिक ए तालिवन पाकिस्तानसँग आवद्ध रहेको जानकारी दिइएको छ ।
नेटोलक्षित शक्तिशाली विस्फोटन
काबुल, २० वैशाख । अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा अवस्थित अमेरिकी राजदूतावास र नेटो प्रमुख कार्यालयनजिकै नेटो सैकिकको एक समूहलक्षित आज शक्तिशाली विस्फोट भएको छ । राजधानी काबुलमा बुधबार भएको यस शक्तिशाली विस्फोटमा परी कम्तीमा आठ व्यक्तिको मृत्यु हुनुको साथै अन्य २५ जना घाइते भएका अधिकारीहरुले बुधबार जानकारी दिएका छन् । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नाजिब डेनिसले यस बम आक्रमण र हताहतीको एएफपी समाचार समितिलाई पुष्टि गर्नुभएको छ । बिहानको व्यस्त समयमा भएको यस आक्रमणमा मारिएका व्यक्ति प्रायः सर्वसाधारण नै भएका बताइएको छ । सो विस्फोटको प्रकृतिको विषयमा अनुसन्धान भईरहेको तर विस्फोटन भएको अवस्थामा विदेशी सैनिक बलको एक समूह त्यहाँबाट गइरहेको डेनिसले जानकारी दिनुभएको
daily sanchar on Facebook